Abambalwa bethu bayazi ukuba iinqongo azikho nje ukunyangwa, kodwa isitolo seprotheni, iivithamini ezahlukeneyo, ukulandelela izinto kunye nezinye izondlo. Ukususela kwixesha elidlulileyo, abantu baye basebenzisa amanqwanqwa ukuze bathuthukise ukugaya, ukulungelelanisa imetabolism nokutshisa amafutha amaninzi.
Cinga iindidi ezininzi zeentonga:
Kwintsimi yaseRussia le nto yaqala ukuphuma eGrisi, ngoko yayibizwa ngokuthi: "Gretsky" Kwimeko yayo ibonakala ifana nesimo sengqondo yomntu. NgeMinyaka Ephakathi, yayisetyenziswe kuphela ngabaphathi njengonyango lweentloko, kwaye abantu abaqhelekileyo babengavunyelwanga nokuba baphathe le nut.
Ukuze kuphuculwe izakhiwo ezixhamlayo zokusetyenziswa kwamannuts, iingcali zincoma ukuba zitya kunye kunye nemifuno encedo. Bangadliwa kunye neziqhamo, izitya zeenyama kunye noshizi.
I-cosmetologists zanamhlanje zisebenzisa i-walnut ngexesha leenkqubo zokulwa nokuguga. I-oyile yelinen ikhupha kakuhle isikhumba, iyayihlamba kwaye inika amandla. Enye ipropati enhle kakhulu yale oli iphuculo lokushisa ilanga kunye nokukhuselwa kwelanga.
Ukuze usebenzise i-walnut ngokunokwenzeka nangomphumo omkhulu, akukhuthazwa ukuyisebenzisa emva konyaka wokugcina. Bamba amanqatha kwihovini elitshisayo ngeminithi emi-5-10, oku kuya kuphucula ngokugqithiseleyo ukunambitha kwabo. Kwaye ukucoceka ingqolowa egoboleni kuya kuba lula. Inqanaba elikhulu kakhulu lemihla ngemihla ngu-10-15 amantongomane. Ngomlinganiselo ongalawulwayo weentongwane ezidliwayo, i-migraines ezinzima, isisongela, ukuhlanza kunye neendlela ezahlukeneyo zokugaya ukutya.
Musa ukukholelwa abo bathi i-walnuts iphikisana nabantu abakhulu kakhulu, kuba baqulethe amaninzi amanqatha. Kule mafutha, i-acid e-unsaturated fatty acids ikhona. Abazibutheli emzimbeni, kodwa zilula kwaye zikhawuleza zithatha. Ngoko ke, ukutya usuku alukho ininzi yamantongomane (malunga namaqhekeza alishumi), awulimazi umzobo wakho.
EYurophu, iinkozo zithengiswa ngekhulu le-16 kwiChina. Kwaye ngoko ukususela kweso sihlandlo sinye yezona zintiti ezizithandayo.
Ayikho inkcazo enobulungisa "yengozi" yamanqwanqwane afanelekileyo ngenxa yokupheka, abayisebenzisayo kunye noshukela. Kule nhlanganiselwano, amanqwanqwa awawuncedi umzimba, kwaye angakhokelela ekutyeni.
Ukuba izitya zisetyenzisiwe ngaphandle kwezongezo, umzimba wakho uza kuzaliswa ngobuninzi bevithamini: A, U, B, C kunye nabanye abaninzi.
Ngokusetyenziswa rhoqo kwamanqatha ungabona ukuphuculwa komsebenzi weenkqubo ze-cardiovascular and nervous systems.
Ngenxa yezakhiwo zabo zondlo, amanqwanqwa athile avimbela ukulamba, evumela abantu abaye batya ukutya, bangabandezeleka ngentswelo yokutya.
Kodwa kukho enye "kodwa", ngokusetyenziswa ngokugqithiseleyo le nut ingaba neempendulo. Ngoko ke, sebenzisa iipinanisi ezingaphezu kwama-30-50 amagremu ngosuku.
AmaNdiya aseMelika ayenesiqinisekiso sokuba umthi wecokoleti - i-cocoa wanika abantu unkulunkulu, wehla esibhakabhakeni waya emhlabathini phantsi kwenkwenkwezi. Wayefundisa abantu ukuba balungiselele isiselo esiphunga elimnandi. Kubalulekile ukuqokelela ingqolowa emthini, gazinga nogaye. Kwiminyaka emininzi, kwathatha umntu ukuba aphendule isiselo esinxilisayo kwi-sweet delicacy yamnandi kubantu abadala kunye nabantwana - ushokoledi.
Ngamaxesha amandulo, amaNdiya ayesazi malunga neenzuzo zethokoleta, kwaye namhlanje namhlanje izazinzulu zenzululwazi ziqinisekisile ukusebenzisa ityhokoleji emzimbeni womntu.
Icoleta iphucula imemori ngokuvuselela ingqondo, inceda ukunciphisa umngcipheko wezifo zentliziyo, ikhulise imingcipheko ebandayo. Ukuba nomthelela we-antimicrobial ngenxa yesiphumo se-tian, i-tsholeta ikhusela amazinyo kwi-plaque.
Ukugcinwa kwetshokolethi yezinto ezinje, njenge-calcium kunye ne-fluorine, kunceda ukwenza amathambo omzimba kunye nokuqinisa amazinyo. I-Magnesium inceda ukulwa noxinzelelo kunye nokwandisa umzimba. I-acaric acid ihlambulula imithwalo yegazi.
Ngethokoleta, ngenxa yemoqo yeoyile, ukungabikho ngokupheleleyo kwe-cholesterol, ukongeza, i-phenol equlethelethile ivimbela ukwakheka kwe-cholesterol.
I-tshiletele ebumnyama, iyanceda ngakumbi. Umxholo we-flavonoids uvumela ukunciphisa inkqubo yokuguga.
Ukuphela kwele tsholeta yimixholo ephezulu yekhalori. Kodwa i-tsholetele ebumnyama kunye neshushu, iikhalori ezingaphantsi. Ngoko ukusetyenziswa kwansuku zonke kungabi nxalenye enkulu yetshokolethi enomrakalo kuya kukunceda.
Imithombo engcono kakhulu ye potassium
Ukungabikho kwamavithamini: ukuxilonga nokuphelisa
Iqanda le-egg: ukubunjwa, iinzuzo kunye nokuchasene
4 amabinzana anokuthintela ukuba ube nolonwabo: banokutshabalalisa ubomi!
Ukuphakama kwesitratshi: izithende eziphathekayo-2015
Indlela abantwana abafumana ngayo ukwahlukana kwabazali babo
Isitayela se-tech-tech ngaphakathi
Indlela yokudibana nomfana ovela emkhosini
Indlela yokunyamekela intsana emva kokubeleka?
Ingulube ibhaka neyinaninate
I-Skewers zeentlanzi kunye neetamatisi zentshuzi